China SUS304 ngesantya esiphezulu 14 intloko multihead umlinganisi mveliso kunye nabenzi | Isisindo esifanelekileyo
Ubunzima beentloko ezili-14 sisicelo esibanzi ngokuthelekiswa neentloko ezili-10 zentloko enkulu. Ilungele isantya esiphezulu okanye iprojekthi yokuchaneka okuphezulu, njengeprojekthi yokupakisha iibhegi ezingama-60-100.
Umthamo weH Hopper: I-1.6L / 2.5L
Inkqubo yolawulo: Ukulawulwa kwemodyuli
Iingxowa ezili-120 / imizuzu
Ubunzima beentloko ezili-14 sisicelo esibanzi ngokuthelekiswa neentloko ezili-10 zentloko enkulu. Kufanelekile ngesantya esiphezulu okanye iiprojekthi zokuchaneka okuphezulu, ezinje ngeebhegi ezingama-60-100 / kwimizuzu yokupakisha iipakethe.
• Inokudityaniswa kobunzima obungaphezulu kwe-16,000 yokuchaneka okuphezulu.
Inkqubo yokulawulwa kwebhodi modular, ibhodi emodareyithayo ye-Smart Weigher iyalela zonke iimodeli, zilungiswe lula.
Iindawo zokunxibelelana ngokutya zahlula-hlula ngaphandle kwezixhobo, ekulula ukuzicoca.
I-Smart Weigh ibonelela ngombono owahlukileyo we-3D (umbono we-4 ngezantsi). Unokujonga umatshini ngaphambili, icala, phezulu kwaye ujonge ukubonwa kwawo ubukhulu. Kucacile ukubazi ubungakanani boomatshini kwaye uthathe isigqibo sendlela yokusetha umlinganisi kwifektri yakho.
Okulandelayo: I-SUS304 umxube weentloko ezingama-24 zentloko ubunzima
14 iintloko zinzima
umlinganisi onesantya esiphezulu
umatshini wokupakisha ubunzima obunzima